घमण्डी आभादेखि आत्मगौरवी आभाको यात्रा
बिहिबार, ३० बैशाख, २०७८
गाँउमा वसन्त ऋतु सुरु हुनासाथ ब्रतबन्ध गर्नेहरुको एउटा लहर नै छाउन थाल्छ। अनि स-साना केटाकेटीहरुलाई चाड नै आए झैं हुन्छ त्यो बेला। नयाँ लुगा लगाएर हरेकजसो ब्रतबन्ध हुने घरमा बिहानदेखि साँझसम्मै केटाकेटीहरुको बास हुने गर्छ । त्यही साना केटाकेटीहरुको भिडको एक हिस्सा ११ वर्षीया आभा पनि बनिन् ।
“ओहो ! कति राम्री नानु कसकी छोरी हौ तिमी ?” कुनै अपरिचितले आभालाई सबैका सामुन्ने सोधेको प्रश्न । “आमाबुबाको” । हजुरबुबा, हजुरआमाकी प्यारी नातिनी आभाले खुब गर्वको साथ जवाफ दिएकी थिइन् ।
त्यो अपरिचित पुर्ण उनको नजिक पुगेर, उनका कोमल गालाहरुलाई आफ्ना कुरुप नजरहरुले सेक्दै, बन्धनहिन औंलाहरुले स्पर्श गर्न खोज्छ। “यहाँ आउन, तिमीसँग गफ गर्न मन लाग्यो। अनि तिमी कहाँ बस्छौ ? घर कहाँ हो तिम्रो?”
त्यस अपरिचितको छुवाई सबैका सामुन्ने भएर पनि निकै अलग र असहज थियो । कसैका आँखाले देख्न नभ्याएका ती सरल प्रश्न पछिको त्यो गलत मन्तव्य थियो उसको । तर आभाले सजिलै आफुलाई भएको असहज महशुस गरेकी थिईन । त्यसैले एकछिन पनि अबेर नगरी उसले प्रतिकार गरिहाल्छे । सायद त्यो घटना आभाको जीवनकै पहिलो प्रतिकार थियो, जहाँ उनी निकै खरो उत्रिन ।
त्यस अपरिचितका हातहरु आफ्ना गालाबाट हटाउँदै, रुखो जवाफ सहित आभाले आफ्ना असन्तुष्टि पोखेकी थिइन् । “मेरो घर जहाँ भएपनि तपाईलाई किन भनौं ? अँह, भन्दिन ।”
अनि उसको त्यो प्रतिकारलाई सबैले अहङ्कारको रुप दिन्छन् । हेर त बोलेकी, छिमेकी काकीले तुरुन्तै आभालाई दोषी ठहर्‍याउँदै आफ्ना तर्कहरु थप्दै भन्नुभयो ।
“कस्ती घमण्डी केटी रैछे । आफुभन्दा ठुलासँग कसरी बोल्ने भनेर तेरा हजुरबुबा हजुरआमाले सिकाएका छैनन् कि क्या हो ?
हुन त ठिकै हो । ती बुढाबुढीले मात्रै पनि अब के पो सिकाउन । तेरा आमाबुवालाई त काम गर्दै, पैसा कमाउदै फुर्सद छैन । छोराछोरीलाई राम्रो संस्कार दिने, ठुलाबडालाई कसरी इज्जत गर्ने भन्ने सम्म सिकाउन नभ्याउने कस्ता आमाबुवा होलान् ?”
ब्रतबन्धमा आएकी आभा, अब केही नबोली रिसले मुर्मुरिदै ब्रतबन्ध छाडेर आफ्नो घरतिर कुदछे। यस्तैयस्तै घटनाहरु पटकपटक घटिरहन्छ तर आभा आफ्नो रक्षा आफै गरिरहन्छे, पुर्ण रुखो जवाफको साथ । अनि समाजले पनि बिस्तारै आभालाई एउटी घमण्डी केटीको उपमा दिँदै जान्छ।
कलिलो उमेरदेखि नै आत्मरक्षाका लागी संघर्ष गरिरहनु पर्दा, उसले रुखो बनेर मात्रै आफुले जित्न सक्छु भन्ने निष्कर्ष निकाली सकेकी थिई।आभा आफ्नी हजुरबुबा, हजुरआमासँग बस्थी । उनी जन्मिएसँगै उनका आमाबुवाले एकअर्कालाई डिभोर्स दिएका थिए।
आभा ६ महिना नपुग्दै उनका बुवाले दोस्रो बिहे गरेका थिए। सुत्केरी व्यथासँगै उनकी आमाले अब आफ्नो श्रीमानसँग विछोडको वेदना पनि सहनु परेको थियो ।
उफ ! ती आमाले कुन हिम्मतले कसरी स्विकारिन होला सबै एकसाथ ?
५ बर्षसम्म आभालाई मातृत्वको आभास भयो । त्यसपछि भने, उनकी आमापनि छोरीको सुन्दर भबिष्यलाई आफ्नो आँखाभरि बोकेर पैसा कमाउने होडमा विदेश पलायन भईन । उ सानैदेखि हजुरबुबा, हजुरआमा सँगै रमाउन थाली । कहिलेकाहीँ हजुरआमाले बढो मायाले सुमसुम्याउँदै आभालाई सम्झाउनु हुन्थ्यो । हेर, छोरी तलाई सबैले रिसाहा, घमण्डी भन्छन् । अलिक ज्ञानी बन है। हाम्री प्यारी छोरीलाई सबैले असल अनि ज्ञानी भनेको सुन्न मन छ, हामीलाई पनि।
आभाले त्यस बखत केही नसोचि हजुरआमालाई अङ्गालेर “हस, आमा । “तपाई जस्तो चाहनुहुन्छ म त्यस्तै बन्ने छु” भन्दै हजुरआमालाई ढुक्क हुन लगाउँछिन । तर उनलाई आफु कहिलै सुधरिनुपर्छ भन्ने नै लागेन । मलाई गलत लागेको कुरा मैले भन्न किन हिच्किचाउनु र ? फेरि मेरो केही गल्ती नभएपछि बोल्न किन डराउनु ? आभाले आफैसँग गर्ने प्रश्नहरु यस्ता हुने गर्थे ।
स्कुले पढाई पूरा गरेर आभा कलेजको यात्रामा लागिसकेकी थिईन । कलेज घरभन्दा टाढा थियो । आउँदा जाँदा सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्नुपर्ने उसको बाध्यता नै थियो । बसमा यात्रा गर्दा महिलाले अनावश्यक भोग्नुपर्ने पिडाबाट बन्चित थिइनन, आभा पनि । तर उनले अरु महिलाको तुलनामा निकै कम हिंसा भोग्नुको प्रमुख कारण भनेकै उनको रुखो प्रतिकार नै थियो।
एकचोटि बसमा यात्रा गर्ने क्रममा बसको बिचको सिटमा बसिरहेको एउटा अर्धबैसेले छेउमै उभिएकी आभालाई नपत्याउने पाराले पछाडीबाट छुन खोज्यो । आभाले तुरुन्तै उसको हात होशियारी पूर्वक समातेर उसलाई त्यसै बखत सबैका सामुन्ने थप्पड समेत लगाई। त्यो अर्धबैसे लाजले रातोपिरो भयो । केही नलागेसी अन्तिममा त्यो अर्धबैसेले सबैका सामुन्ने आभासँग माफी मागेरै कुरा टुङ्गियो । बसभरीका यात्रु सबै प्रत्यक्षदर्शी थिए । सबैले आ-आफ्नै ढङ्गले अड्कल काटे, एक जमात उनको पक्षमा वकालत गर्दै “ठिक गरिन्” भन्दै थियो।
तर अर्कातिर, एक हुल चैं, “कस्ती केटी रै छे ? गल्तीले छुईयो होला कहिलेकाहीँ त भइहाल्छ नि, किन त्यसरी आफू भन्दा ठुलाको बेइज्जत गर्नु । एक गल्ती त भगवानले पनि माफ गर्छन् ।” भन्दै आ-आफ्नै तर्कहरु राख्दै थिए ।
दिनदिनै आभाको यस्तो व्यवहार देख्नेहरुलाई झन कठोर लाग्दै गयो । कस्ती केटी रैछे ? सहनशीलता भन्ने त फिटिक्कै नभएको यस्ती केटीले कसरी घर गरि खान्छे ? कसले बिहे गर्ला यस्ती घमण्डीसँग ? सबैको नजरमा आभा एक निडर तर निकै रुखो प्रवृत्तिको पात्र बनेकी थिइन् ।
समाजले पनि उनको नाम भन्दा अगाडी उनको विशेषता जोडेर, “घमण्डी आभा” को संज्ञा दिँदै नामकरण गरिदियो ।
समाजले कहिलै नियाल्न नसकेको ती घमण्डी आभाको रुखो व्यवहार पछिका मर्महरु । त्यस्ता “घमण्डी” देखिने आभाहरुको उदय पनि अखिर समाजबाटै त हुने हो। उनले देखाउने व्यवहार पनि उनले भोग्नुपरेका ती चुक भन्दा अमिला यादहरुको परिणाम न थियो ।
अनि यस्ता कुराको प्रभाव उनको दैनिकीमा पनि दिनदिनै देखिन थाल्यो । उनको साथीहरु कम हुँदै गए। केटाहरुबिच पनि उनलाई हेर्ने दृष्टिकोण निकै फरक हुँदै गयो । प्रायः केटाहरुबिच कुरा हुँदा आभालाई फरकधारले चित्रण गरिन्थ्यो । “केटीहरु यस्तो बढ्ता भएको त राम्रो हैन ।” यसमा सबैको एउटै राय हुने गर्दथ्यो ।
अनि यस्तैयस्तै थुप्रै अड्कलहरु काटिन्थ्यो, उनले यस बिषयमा सबै हेक्का पाएकै हुन्थिन् । यद्यपि आफूभित्रको आफुलाई कसैको अघि पस्किन नपाएकोमा, उ भित्रभित्रै गुम्सिदै थिइन् । यथार्थ बुझ्ने र सत्य खोज्न प्रयास गर्नेहरुभन्दा पनि हतारमै हुन्छन् सबै आ-आफ्नो धारणा लेख्न । अनि त्यसैको उपज बनिसकेकी छे आभा, घमण्डी आभा ।
उनको जीवन एक हिसाबले निकै सहज थियो। आफ्नो सुख दुःखको चाबी उनले कसैलाई सुम्पिएकी थिइनन् । उनी दिनदिनै उमेरले पनि परिपक्व हुँदै गएकी थिइन् । उनका रहरहरुले पनि अब छुट्टै संसारको कल्पना गर्न थालेको थियो । अनि नवराज पराजुलीले आफ्ना कविताहरुमा भनेजस्तै “मलाई कसैले देखोस, नदेखोस् ! देख्नु पर्नेले देख्दै छ ।”
त्यसरी नै आभाको जीवनका हरेक घटनाहरूमा पनि आशिषको नजर परेकै हुन्थ्यो । कसैले देख्न र बुझ्न नसकेका वा बुझ्नै नचाहेका आभाको जीवनका सजिला देखिने जटिल खुड्किलाहरु आशिषको नजरले फेला पारेकै हुन्थ्यो ।
आशिष र आभाको पहिलो भेट बसमा भएको थियो । जहाँ आभाले आफुमाथी भएको दुर्व्यवहारको विरुद्ध रुखो प्रतिकार गरेकी थिइन् । त्यस घटनाका प्रत्यक्षदर्शीमध्ये एक थिए आशिष । पछि उसैले यो बिषयमा दोषीलाई क्षमायाचना गर्न लगाएर बिषय टुङ्गो लगाएका थिए ।
आशिष उमेरले पनि आभाभन्दा ठुला थिए अनि सोचले पनि परिपक्व । “हिंसा, अन्याय सहनुभन्दा त्यसको प्रतिकार गर्नु सधैं उत्तम हुन्छ, चाहे त्यो प्रतिकार गर्ने शैली फरकै किन नहोस् । तिमी कहि पनि गलत छैनौ । “आशिषका यस्तै हरेक शब्दहरुले आभामा एक प्रकारको उर्जा थपिदिएकै हुन्थ्यो।
आजको कानुनले पनि महिलालाई निकै अब्बल बनाइदिएको छ ।
“आफुमाथी हुने अन्याय र हिंसाको विरुद्ध लड्नुपर्छ, नत्र अन्याय सहने “तिमी” पनि अपराधी नै हुनेछौ ।” यस्तै यावत कुराहरु कानुनले चिच्याउँदै भनिरहेकै हुन्छ। यद्यपि वास्तविकतामा कार्यान्वयन भने शुन्य बराबर छ ।
“बिस्तारै बोल । कम बोल । नरम बोल । आफू बचेर हिँडे त भईहाल्छ नि किन अरुलाई दोष लगाउनु ? किन बेइज्जतिको सिकार बन्नु, अलि अलि त सहनै पर्छ नि अनि बल्ल तिमी असल ज्ञानी चरित्रकी धनी हुनेछौ ।” असल नारीको चरित्र चित्रण गर्न, यस्तै मापदण्डहरु बनिदै गए ।
त्यसैको उपज आत्मगौरवी आभालाई उसैका समाजका पात्रहरुले घमण्डीको उपमा दिने क्रम चलिरहन्छ ।
उनको चाहना कसैलाई दु:ख दिने थिएन । यद्यपि महिलाले सानातिना कुरा त सहनै पर्छ, कहिलै रुखो बन्नु हुँदैन भन्ने सोचले ग्रसित समाजका लागी उनी सधैं अप्रिय बन्दै गइन। आशिष, एक विवेकी युवाको प्रतिनिधित्व गर्ने नैतिकताले भरिपुर्ण व्यक्ति थिए । कुनै पनि विषयमा गम्भीरतापुर्वक अध्ययन गर्नु उनको बिशेषता नै थियो । आभाको विषयमा पनि उनको रुचि उही थियो ।
“हिंसा सहनु भनेको पनि हिंसालाई बढावा दिनु हो, चाहे त्यो हिंसा जति नै साना किन नहोस, प्रतिकार नगरे हिंसकलाई फेरि अर्को हिंसा गर्न पाउने छुट दिए बराबर हो।” त्यसैले जसरी सक्छौ त्यसरी नै विरोध गर भन्दै आशिष हरपल उसको साथै उभिने गर्थ्यो ।
संविधानमा उल्लेखित ती तमाम महिला हक र अधिकार, केवल संविधानका धारा र उपधारामै सिमित छन् । महिलाहरु अघि बढुन । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक हरेक क्षेत्रमा आफ्नो सक्रिय सहभागिता बढाउन ।तर किन यो सहभागिता फितलो छ ? किन सोचे जस्तो महिलाहरु अगाडी आउन नसकेका होलान ? के साँच्चै क्षमताकै अभाव भएर हो ? यी यावत प्रश्नहरु सधै ओझेलमा पर्छन् ।
लैगिक हिंसा विरुद्धको कानुन बनेको छ तर मानसिकता बन्न सकेको छैन, समाज बन्न सकेको छैन, संस्कृति बन्न सकेको छैन । त्यसो त महिला स्वयंम पनि कतिपय अवस्थामा नैतिकता, आत्मसम्मान र स्वाभिमानको विषयमा सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
आभाले आफुमाथी भएका सानाठूला सबै प्रकारका अन्यायको विकल्पमा प्रतिकार रोजिन । त्यो उनको स्वाभिमान र आत्मसम्मानको बलियो पक्ष थियो । आफ्नो त्याग, समर्पण र स्नेह देखाउने नारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । नारीले आफ्नो वास्तविक पहिचान कायम गर्न सक्नुपर्दछ । प्रतिकार गर्न सक्नुपर्छ । आफ्नो आत्मरक्षाको जिम्मेवारी आफैले बहन गर्न पनि सक्नुपर्छ ।
इतिहासका योद्धा मानिने नाम “योगमाया न्यौपाने” को प्रतिनिधित्व अबका आभाहरुले गर्नेछन् ।
समाजको खोक्रा आदर्शवादलाई समाप्त गर्न अब सबै प्रतिकारात्मक आभाहरुको उदय हुनैपर्छ । तत्कालिन समयमा फर्किएर हेर्ने हो भने पनि ५ वर्षको उमेरमा विवाह भएकी योगमाया ९ वर्षको उमेरमा विधवा हुन पुगेकी थिइन । शताब्दी अगाडिको तत्कालिन समाजमा परिर्वतनको पक्षमा आवाज उठाएर घर र माइती दुवैतर्फबाट अवहेलना सहनु परेको थियो योगमायाले ।
उनको लागि त्यो एकएक निमेषपनि कति गाह्रो थियो होला ? हामी त केवल कल्पना मात्रै गर्न सक्छौं ।
आफ्नो आत्मरक्षाका लागि आभाले पटकपटक लडिरहँदा घमण्डीको उपमा दिने यो समाजले झन योगमायाको विद्रोही चरित्रलाई कसरी चित्रण गर्यो होला ? सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यस्तो समाजमा पनि योगमायाले आफुलाई नै चुनौती दिँदै १७ बर्षको उमेरमा विधवा बिहे गर्ने आँट गरिन । जुन नेपाली समाजमा अझै पनि स्थापित हुन सकेको छैन ।
पछि उनले सतीप्रथा, धनी गरिबको नाममा हुने विभेद, जातभातको नाममा हुने सानाठुला विभेद, अत्याचार र राणा शासन विरुद्ध विद्रोह गरेकी थिईन। त्यस्ता योगमाया, यस्ता आभा सबै समयकालका फरक-फरक पात्र मात्रै हुन् । तर यिनले भोग्नुपरेको पीडा भने उही छ ।
बिडम्बना अहिलेको आधुनिक समाजको । योगमायाले विगतमा गरेका संघर्षलाई बुझे जस्तो र सम्मान गरेजस्तो गर्दै, ती आजका तमाम आभाहरुलाई भने फर्कनै नदिई अझै आफ्ना झुठा आदर्शका मापदण्डहरु भित्र, असल चरित्रको रेखाभित्र सिमित बनाईदिन्छन ।
योगमायाले आफ्नो कालखण्डमा आफुलाई असल योद्धा भनेर चिनाउन सफल रहिन । त्यसैले उनको कथालाई अन्त्यमा समाजले सम्मान गर्दै सुनिदियो । त्यसरी नै आभाको कथा पनि यही समाप्त हुने छैन। उनको यात्रा निरन्तर संघर्षको पथमा अघि बढिरहन्छ जबसम्म समाजले “घमण्डी आभा” लाई परिणत गरेर “आत्मगौरवी आभा” को उपमा दिँदैन उनको यात्रा तबसम्म यथावत अघि बढिरहन्छ।
मेरो प्रश्न : के हुन्थ्यो होला यदि समाजले निर्माण गरेको त्यही “असल नारीको चरित्र” भित्र योगमायाले आफुलाई सिमित राखेकी भए ?? के उनले यो ईतिहास बनाउने जमर्को गर्थिन होला र ?
यो पनि पढ्नुहोस : दाजुभाई नहुँदाको संघर्ष वा अवसर…
बुधबार, १५ बैशाख, २०७८
कडा र नरम निषेधाज्ञा !
कोरोना महामारीले सारा समाज आक्रान्त छ । दिनहुँ मानिस मरिरहेका छन् । हजारौं संक्रमित भइरहेका छन् । उपचार गर्न अस्पतालहरु अपुग भएका छन् । जो कसैले अस्पतालमा पुगेर उपचार पाउने अवस्था छैन । अस्पतालमा उपचार गर्न पनि सोर्सफोर्स लगाउनुपर्ने अवस्था
मारमा कोरियन भाषा पढेका युवा
लामो समयदेखि कोरिया जाने सपना देखेर कोरियन भाषा पास गरेर बसेका नेपाली युवाहरु मारमा परेका छन् । यो विषयमा न त इपिएस कार्यालयले चासो दियको छ न त सरकारे नै 丨कति युवाहरु डिप्रेसनको शिकार भए भने कतिले कोरिया जाने सपना
‘कोभिडमा रेमडिसिभिर प्रभावकारी छैन’
डा. रोशन खड्का, वरिष्ठ फिजिसियन, कोशी अस्पताल
कोभिड उपचारमा रेमडिसिभिर नामक एण्टिभाइरल औषधिको माग बढ्दै गएको छ । नेपालमा बिक्री प्रतिबन्ध रहेको रेमडिसिभिर अहिले सीमित परिमाणमा सरकारले आयात गरिरहेको छ भने भारतबाट तस्करी भएर ठूलो परिमाणमा यो औषधि आउने गरेको छ । बिरामीका आन्तहरुले अबैध रुपमा आयात
सकारात्मक निर्णय कार्यान्वयन होस्
पुण्य पी अधिकारी
पछिल्ला दिनमा प्रदेश १ को राजधानी रहेको मोरङमा कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या अत्यासलाग्दो रुपमा बढेको छ । लुम्बिनी प्रदेश तहसनहस पारेको कोभिड–१९ ले सङ्घीय राजधानीपछि प्रदेश राजधानी विराटनगरलाई गाँजेको छ । यसबीचमा कोभिड–१९ सङ्क्रमितहरूमध्ये केहीले मृत्युवरण गरेको अवस्था छ भने सुधार
समाजवादको कार्यभार र दलीय आधारशिला
दशकौंको आन्दोलनले जनताका अधिकारहरु दस्तावेजीकरण भएका छन् । स्थानीय तहहरु अधिकारसम्पन्न छन् । यो आन्दोलनको उपलब्धि हो । यसलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणसहितको समाजवादी यात्राको पक्षमा प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । यसको लागि समृद्धिको भरपर्दो मार्गचित्र, इमान्दार कार्यान्वय र
मातातीर्थ औंसी । वैशाख शुक्ल प्रतिपदाको दिन मनाईने यो पर्व । आमालाई सम्झना गर्ने, स्मरण गर्ने, माया गर्ने दिन । हुनत कहिले पो आमाबाट टाढा भईन्छ र ! भौतिक रुपमा टाढा भएपनि मनमस्तिष्कबाट सधैं नजिक भईन्छ । परापूर्व कालदेखि आजसम्म